Nzira Yokuwana Nayo Rubatsiro - Prairie State Legal Services
Iri bhatani "Nyorera Pamhepo" richakuendesa iwe kune iyo Illinois Legal Aid webhusaiti, uko Prairie State inomiririra yayo online yekudyira system
Kusvika kwedu Dzimba Dzakanaka Project, kufona (855) FHP-PSLS / (855) 347-7757.
Kusvika kwedu Zvemutemo Rubatsiro rweVaridzi Veimba Chirongwa, kufona (888) 966-7757.
Kusvika kwedu Rubatsiro rweMutemo kune Vakwegura Vakuru Chirongwa, kufona (888) 965-7757.
Kusvika kwedu Yakaderera Inowanikwa Mutero Kiriniki, kufona (855) TAX-PSLS / (855) 829-7757.
Kune mamwe ese mapurogiramu, fonera hofisi yemo.
Vese vanyoreri vanozoongororwa kukodzera.
Iye munhu anoda rubatsiro rwemutemo anofanira kunyorera kunze kwekunge iye asingakwanise kudaro nekuda kwezera kana hurema.
Iva nemapepa chero api zvawo edare kana zvimwe zvinyorwa zvakakosha zviripo paunodana.
Vaturikiri vanowanikwa pasina muripo pazvinenge zvichidiwa.
Nekuda kwekushomeka zviwanikwa, hatigone kubatsira munhu wese. Kuti uwane rumwe rubatsiro, shanyira yedu Yekuwedzera Zvinyorwa peji.
Kuti uve unokodzera rubatsiro kubva kuPrairie State Legal Services kunoenderana nezvinhu zvinotevera:
Unosangana neyedu mari uye nhungamiro yemidziyo. Kazhinji, mutengi anokodzera kana mari yake yemhuri iri pasi pe125% yehurombo hwehurombo, kana kusvika pamazana maviri muzana ehurombo hwehurombo kana imba iine imwe mari. Mamwe ma grants anotibvumidza isu kushandira vamwe vatengi vane yakakwira mari uye / kana Asset maitiro.
Tine hapana kukakavara kwechido maererano nenyaya yako yepamutemo.
iwe gara munzvimbo yedu yebasa, kana kuve nedambudziko repamutemo mune imwe yematunhu ari munzvimbo yedu yebasa. Kuti uone nzvimbo yedu yebasa, tinya pano.
Iwe unosangana ne ugari hwemo kana zvekupinda munyika yakagadzwa neCongress. Vanhu vari kutiza mhirizhonga mudzimba kana kutengesa vanhu vanokodzera zvisinei nemamiriro ekupinda munyika mukutarisa kushungurudzwa
hurumende mirau hairambidze Prairie State Legal Services kubva mukubata yako mhando yedambudziko repamutemo.
Une rimwe kana anopfuura matambudziko emutemo izvo zvinowira mukati medu zvatakaisa pakutanga.